China Industrial ukukhiqizwa plant isigaba ifektri abakhiqizi | Zhenyuan
Imboni yezimboni: kubhekiswa kuzo zonke izinhlobo zamabhilidi asetshenziselwa ukukhiqiza noma ukuxhasa umkhiqizo, kufaka phakathi ama-workshops amakhulu, izakhiwo ezisizayo kanye nezinsiza ezisizayo.Izimboni ezimbonini, ezokuthutha, ezentengiselwano, ezokwakha, ezocwaningo lwesayensi, ezikoleni nakwezinye izingxenye zizofakwa kumasifundisane asetshenziselwa ukukhiqiza, izitshalo zezimboni zifaka nezakhiwo zazo ezisizayo.
Ishabhu lezimboni lingahlukaniswa libe isakhiwo esinezitezi esisodwa nesakhiwo sezimboni esinezitezi eziningi ngokuya ngohlobo lwesakhiwo salo.
Ubuningi bezakhiwo zezimboni ezinezitezi eziningi zitholakala embonini elula, ezobuchwepheshe, ezokuxhumana, ezokuxhumana, ezemithi nezinye izimboni. Lolu hlobo lwefektri phansi ngokuvamile aluphakeme kakhulu, futhi ukwakheka kwalo kokukhanyisa kuyefana nezakhiwo ezijwayelekile zesayensi zelebhu, futhi iningi lazo lisebenzisa izikimu zokukhanyisa izibani ze-fluorescent. izakhiwo zezimboni, futhi ngokuya ngezidingo zokukhiqiza, eziningi zazo izitshalo zezimboni ezinesiteji esisodwa, okusho ukuthi, izitshalo ezinemikhakha eminingi ezihlelwe ngokufana eduze komunye nomunye. Isikhala ngasinye singafana noma sehluke njengoba kudingeka.
Ububanzi (ubude besikhathi), ubude nokuphakama kwesakhiwo sefektri esine-single kunqunywa ngokuya ngezidingo zobuchwepheshe ngesisekelo sokuhlangabezana nezimfuneko ezithile zamamodeli wokwakha. Isikhathi sesitshalo B: Ngokuvamile 6, 9, 12, 15, 18, 21 , 24, 27, 30, 36m ....... ubude bendawo yokusebenzela uL: okungenani amashumi amamitha, amakhulu amaningi amamitha.Ukuphakama kwesitshalo H: esisezingeni eliphansi kuvame ukuba yi-5 ~ 6m, futhi ephezulu ingafinyelela ku-30 ​​~ 40m, noma nangaphezulu. Isikhathi nobude beworkshop yizona zinto ezibalulekile ezicatshangelwa ekwakhiweni kokukhanyisa kwe-workshop.Ngaphezu kwalokho, ngokuqhubeka kokukhiqizwa kwezimboni kanye nezidingo zokuthuthwa komkhiqizo phakathi izigaba, izitshalo eziningi zezimboni zinama-cranes, angaphakamisa izinsimbi ezikhanyayo ze-3 ~ 5t nezinkulu zamakhulu amathani.
Izinga lokuklama le-workshop yezimboni lincike esakhiweni se-workshop, futhi ukwakhiwa kwe-workshop kunquma uhlobo lwe-workshop ngokuya ngezidingo zenqubo yezobuchwepheshe nezimo zokukhiqiza.
Ukucaciswa kokuklanywa kwesitshalo okujwayelekile
1. Ukwakhiwa kwezitshalo zezimboni kumele kwenziwe ngokulandela izinqubomgomo kanye nemihlahlandlela efanele yoMbuso, kuthuthuke ngobuchwepheshe, kube nenqondo kwezomnotho, kusetshenziswe ngokuphepha, kuqinisekiswe ikhwalithi, futhi kuhambisane nezidingo zokongiwa kwamandla nokuvikelwa kwemvelo.
2. Lokhu kuchazwa kusebenza ekwakhiweni kwezitshalo zezimboni ezisanda kwakhiwa, ezakhiwe kabusha noma ezinwetshiwe, kodwa hhayi egumbini elihlanzekile lezinto eziphilayo elinamagciwane njengento yokulawula.Izinhlinzeko zale Khodi eziphathelene nokuvinjelwa komlilo, ukuphuma kanye nezindawo zokulwa nomlilo ngeke zisebenze ukwakheka kwezitshalo zezimboni eziphakeme kakhulu nezitshalo zezimboni ezingaphansi komhlaba ezinokuphakama kwesakhiwo okungaphezu kwamamitha angama-24.
I-athikili 3 lapho isakhiwo sokuqala sisetshenziselwa ukuguqulwa kobuchwepheshe obuhlanzekile, ukwakhiwa kweworkshop yezimboni kumele kususelwe kuzidingo zenqubo yokukhiqiza, kulungiswe izinyathelo ngokuya ngezimo zendawo, ziphathe ngendlela ehlukile, futhi zisebenzise ngokugcwele izakhiwo ezikhona zobuchwepheshe.
Ukwakhiwa kwama-workshops ezimboni kuzodala izimo ezidingekayo zokwakhiwa, ukufakwa, ukunakekelwa, ukuphathwa, ukuhlolwa nokusebenza okuphephile.
Idizayini yesitshalo sezimboni izothobela izidingo ezifanele zamazinga kazwelonke akhona manje kanye nemininingwane eyengeziwe ngaphezu kokusetshenziswa kwale khodi.
Okwesithupha, isitshalo sezimboni sakhiwa yisakhiwo esizimele (i-workshop), nesakhiwo esizimele (indawo yokuhlala), ibanga eliphakathi kwalezi zakhiwo ezimbili ngamamitha ayi-10, eliseduze elingengaphansi kwamamitha amahlanu, ukuze kuqedwe ukwamukelwa kwabafanelekayo Isilinganiso sendawo yaphansi nendawo yaphansi yesakhiwo ngu-1: 3.
Isigaba Sezimboni Zokukhiqiza Ezimboni
Ukuphakama kwesakhiwo sefektri
Uhlelo lwe-crane beam
Umdwebo ophelele we-3D wesakhiwo sensimbi
Ukuphakama kohlaka lwensimbi Ukudweba 1
Ukuphakama kohlaka lwensimbi Ukudweba 2
Umdwebo oqinile wohlaka lwensimbi jikelele
Langaphambilini I-Villa Design
Olandelayo: Izigaba Zabasebenzi Nokuhlelwa Kokwakhiwa
Idizayini Yokwakhiwa Kwensimbi Yezimboni